Real Madrid oo ka walaacsan dhaawacyada soo gaaray difaacyadeeda laf dhabarta ah ee Sergio Ramos iyo Raphael Varane – Gool FM
Real Madrid oo ka walaacsan dhaawacyada soo gaaray difaacyadeeda laf dhabarta ah ee Sergio Ramos iyo Raphael Varane
Dajiye November 18, 2020
(Madrid) 18 Nof 2020. Difaaca kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa dhaawac kaga baxay ciyaartii ay xulkiisa qaranka Spain uu 6-0 ku xasuuqay dhiggiisa Jarmalka.
Ramos ayaa dareemay xanuun dhanka muruqa bowdada ah, waxaana uu banaanka u saaray kubaddii lagu ciyaarayay , sidaas darteed, Tababare Luis Enrique ayaa go’aansaday inuu kabtankiisa ku badelo da’ yarka kooxda Manchester City ee Eric Garcia.
Kabtanka Los Blancos ayaa ciyaarta ka baxay daqiiqaddii 43-aad ee ciyaarta, waxaana uu noqday badelkii labaad ee ay Spain sameyso qaybtii hore ee ciyaarta.
Dhanka kale, Ramos mataankiisa difaaca dhexe ee Raphael Varane ayaa isna dhaawac uu kasoo gaaray ciyaartii ay xulkiisa Faransiiska guusha soo laabashada leh ka gaareen dhiggooda Sweden.
Zinedine Zidane ayaa sii wajahay culeys kale maadaama difaaca dookha saddexaad ee Eder Militao uu la karaantiilan yahay xanuunka Korona Fayras.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa ka walaacsan sida ay u maareyn doonto xaaladda dhaawacyada ee xiddigaheeda difaaca xilli Sabtida ay la ciyaari doonto Villareal, Arbacada soo aaddanna ay la balansan yihiin Inter Milan kulan ka tirsan Champions League, waxaana xusid mudan in labadaas kulanba ay Los Blancos marti noqoneyso.
Meeqa sano ayuu ahaa heshiiskii uu Suarez ka doonayey inay siiso Barcelona, kaasoo sababay inuu kooxda ka tago?
WARBIXIN: BIXITAANKII FERGIE BARAARO KAMA DAMBEYN! Manchester United waxay qarash gareysay 1 bilyan oo gini tan iyo markii uu fariistay Ferguson, afar tababarena waxay la soo saxiideen 37 ciyaaryahan, balse kaliya waxay qaadeen saddex koob